फेसबुकले नाम परिवर्तन गरेपछि ट्विटरमा यस्तो मजाक ! - Dainik Online Dainik Online
फेसबुकले नाम परिवर्तन गरेपछि ट्विटरमा यस्तो मजाक !
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७८, आइतबार ८ : ३८
न्युयोर्क । फेसबुकले कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेपछि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले व्यंग्य गर्न थालेका छन् । कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर मेटा राखेपछि ट्विटर प्रयोगकर्ताले मजाक गरेका छन् ।
एक प्रयोगकर्ताले नयाँ नाम लागूऔषध जस्तो लागेको प्रतिकृया दिएका छन् । ‘तपाई मेटामा हुनुहुन्छ भनेर कसैलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? मेटाको आवाज नै लागूऔषध जस्तो छ,’ केयर अवेर अकाउन्टमा फ्रान्सिन जिविट लेख्छन् ।
नयाँ नाम जोकजस्तै सुनिएको केही प्रयोगकर्ताको प्रतिकृया छ । कम्पनीले फेसबुकको नाम रिब्रान्ड गरेको देख्दा आफूलाई दिक्क लागेको उनीहरुको भनाई छ । ‘फेसबुकले किन मेटा नाम राख्यो रु सायद कुनै जोश नभएर होला ?’ मेक्सगफ नामका ट्विटर प्रयोगकर्ता टिप्पणी गर्छन् ।
फेसबुकले नाम परिवर्तनबारे ट्विटरमा गरिएको बहस आफैमा मेटा भएको केहीले व्यंग्य गरेका छन् । जोन रस लेख्छन्, ‘फेसबुकमा पोस्ट गरिएका हरेक विषय आफैमा मेटा हुन् । ’
इजरायल र प्यालेस्टायनमा हेब्रु समुदायले मेटाको अर्थ मृत भन्ने बुझिन्छ । फेसबुकले नाम परिवर्तन गरेपछि एउटा चिहानको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएको थियो । नाम परिवर्तनप्रति धेरैले असन्तुष्टि देखाएका छन् । एक प्रयोगकर्ताले एनबीए खेलाडी मेटा वल्र्ड पिसको तस्बिर पोस्ट गर्दै अगाडि लेखेका छन्, ‘हामीलाई थाहा भएको मेटा यही हो ।’
म्याट ओस्वाल्ट अगाडि लेख्छन्, ‘मेटा भनेको मैले विद्यालय पढ्दा मलाई असाध्यै मन पर्ने केटीको नाम हो । धेरै समयपछि उनले खोपविरोधी लिंक पोस्ट गरेको देखे ।’
एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र बेलका खाना खाएपछि, भीम रावल भन्छन्-धाँधलीको संकेत
काठमाडौं । नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्र साँझ ७ बजेपछि मात्र हुने भएको छ।
कांग्रेस कञ्चनपुरको सभापतिमा बोगटी निर्वाचित
नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुरको सभापतिमा पदम बोगटी निर्वाचित भएका छन्। बोगटीले आफ्ना निकतटम प्रतिद्वन्द्वी बहादुर सिंह
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १५८ कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १५८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा ६ हजार
पार्टीको निर्णय विपरीत अधिवेशन गर्नु आपत्तिजनक: भीम रावल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीको निर्णय विपरित काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका
बागमती किनारमा महिलाको शव फेला
काठमाडौंको टेकुस्थित बागमती किनारमा एक महिलाको शव फेला परेको छ। पहिचान नभएकी करिव ३५ वर्षीया
युट्युुबको डिस्लाइक संख्या लुकाइयो, डिस्लाइक गरिएपनि त्यो नदेखिने
नेपाल टेलिकमले 5G को परीक्षण गर्ने, ९७४ रेन्जमा आधारित सिमकार्ड बिक्री रोक्न निर्देशन
अर्बपति बेजोस भन्छन्ः अन्तरिक्षमा बच्चा जन्मिनेछन्, पृथ्वीमा विदा मनाउन जानेछन्…
यी हुन् अन्तरिक्षमा हिड्ने पहिलो चिनियाँ महिला
भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सञ्चालनमा आयो नेपालकै पहिलो ‘स्मार्ट पार्किङ’
चीनद्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपण